खोप आयो...खोप आयो, पहुँचवालै नै लायो - Nepalese Times
खोप आयो…खोप आयो, पहुँचवालै नै लायो
नेप्लिज संवाददाता ७ श्रावण २०७८, बिहीबार ०६:३६ (1 हप्ता अघि) ७७ जनाले पढ़िसके
खोपको आसमा रहेका ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोपमा पहुँच पुर्‍याउन धौ–धौ देखिएको छ। विश्वभर साढे ३ अर्बभन्दा बढी व्यक्तिले खोप लगाउँदा नेपालमा ४.३ प्रतिशतले मात्र पाएको देखिन्छ।
कोरोना भाइरसबाट जोगिन १८ वर्षभन्दा माथिका नागरिकको नजर खोपमै केन्द्रित छ। देशव्यापी रूपमा २९ असारदेखि खोप अभियान सञ्चालन गरिए पनि कतिपय जिल्लामा स्थगन गरिएको छ।
धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई खोप लगाउन नसके तेस्रो लहरको जोखिम झन् बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार कोरोना परीक्षण पनि न्यून गर्ने र खोपमा पनि ढिलाइ गर्दा संक्रमण झन् बढ्ने जोखिम हुन्छ। सहप्रवक्ता डा। अधिकारीका अनुसार अहिले औसत संक्रमणदर २२ प्रतिशत छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख डा.अनुप बाँस्तोला निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘हरेक दिन १५ देखि २० जना व्यक्ति कोरोना संक्रमणको लक्षणसहित आइरहेका छन्। तीमध्ये ७ देखि १० जनालाई भर्ना गर्नुपरिरहेको छ’, डा. बाँस्तोला भन्छन्, ‘अस्पतालको शय्या खाली हुन पाएको छैन।’
खोप केन्द्र स् संक्रमणको थलो ?
खोपको स्थानीय व्यवस्थापन र सूक्ष्म योजनाको समन्वय प्रदेश र सोमातहतका सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय सरकारले गर्छन्। तर, अहिले प्रभावकारी समन्वय नहुँदा खोप केन्द्र भद्रगोल बनेका हुन्।
मन्त्रालयले यथेष्ट खोप केन्द्रको व्यवस्था गर्न, खोप दिने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अपिलसमेत गरेको छ। ‘सबैको पालो आउँछ। पालो नभएको बेला भीडभाड नगरौं। खोप केन्द्रमा धेरै भीडभाड भए संक्रमण हुनसक्छ’, सहप्रवक्ता डा। अधिकारी भन्छन्।
खोप लगाउन आउनेको संख्या धेरै भएकाले व्यक्ति व्यक्तिबीचको भौतिक दूरी कायम हुन सकेको छैन। खोप लगाइसकेपछि खोप केन्द्रमा २ मिटर दूरी कायम राखेर आधा घण्टा बस्नुपर्ने हुन्छ। सम्भव भएसम्म स्यानिटाइजर साथमै बोक्ने र कुनै पनि सतह छुनेबित्तिकै हात सफा गर्नुपर्छ। ‘लाइनमा बसेर दूरी कायम गरी आफूलाई संक्रमणबाट जोगाउनु अपरिहार्य छ।
स्वास्थ्य मापदण्ड तोडेपछि आउँदा दिन कठिन हुनेछ। तेस्रो लहरको संक्रमणमा पर्ने जोखिम छ’, डा। बास्तोला भन्छन्, ‘खोप लगाइसकेपछि अब मलाई केहि हुँदैन भन्ने सोचेर स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा खोप लगाएका व्यक्तिहरू पनि सिकिस्त संक्रमित भएर अस्पतालमा भर्ना हुने संख्या जारी छ।’
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा‍‍. अधिकारीका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा सफल भएका र गुणस्तरीय खोप नै नेपाल ल्याइएको छ। खोपको गुणस्तर कायम राख्दै खोप अभियान चाँडो सक्न प्राथमिकतामा राखेको डा। अधिकारीको भनाइ छ। जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लूएचओ०ले मान्यता दिएका खोपहरू मात्र ल्याएर प्रयोग गरिने उनी बताउँछन्।
खोपको पहिलो वा दोस्रो डोज लिएपछि शरीरमा कोरोनाको प्रभाव जान्न भारतमा नयाँ अध्ययन गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यो अध्ययन भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् (आईसीएमआर) द्वारा गरिएको हो। यो कोरोना संक्रमितको जीनोम विश्लेषणमा आधारित छ। पीसीआर परीक्षण गरिएका ६ सय ७७ जनामा जीनोम विश्लेषण गरिएको थियो। ४ सय ८२ जनामध्ये ७१ प्रतिशतमा कोरोना संक्रमणको लक्षण थियो। २९ प्रतिशत लक्षणविहीन ९एसिम्टोमेटिक० थियो।
अध्ययनअनुसार ९।८ प्रतिशत व्यक्ति खोप लिइसकेका र अस्पतालमा भर्ना गर्नुपरेको थियो। जबकी, ०।४ प्रतिशत संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। उक्त अध्ययनले खोपले सुरक्षा प्रदान गर्ने कुराको स्पष्ट भएको छ।
कहाँ–कहाँबाट खोप ?
नेपालमा चीन र भारतबाट अनुदान र खरिद गरी ल्याइएका खोपले सर्वसाधारणलाई खोपमा पहुँच पुर्‍याएको छ। भारत र चीनले अनुदानमा खोप दिएका छन्। त्यस्तै ती मुलुकबाट खोप खरिद गर्ने कार्य पनि अघि बढेको छ। भारतबाट १०लाख मात्रा अनुदानमा उपलब्ध भएको थियो। खरिद गरेको १० लाख डोज पनि उपयोग गरिएको छ।
भारतले नेपाली सेनालाई थप १ लाख डोज उपलब्ध गराएको थियो। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिमरुपमा पैसासमेत तिरिसकिएको १० लाख डोज अझै आएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भुक्तानी दिइसकेको १० लाख डोज खोप दिने आस्वासन दिएका छन्।
चीनले पनि हालसम्म १८ लाख डोज खोप सहयोग गरेको छ। त्यस्तै चीनबाट खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत थप खोप लिन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चीन जाँदै छ। यसै साताभित्र १६ लाख खोप आइपुग्ने जनाइएको छ।
साउन १५ गतेभित्र कम्तीमा ३२ लाख र त्यसपछि निरन्तर खोप नेपाल आउने क्रम जारी रहने जनाइएको छ। ‘हामी सबैले खोप लगाउन पाउनेछौं। त्यसैले सबैलाई संयमित भई खोप अभियान सफल बनाउन अनुरोध गर्दछु’, उनी भन्छन् ।
हाल भेरोसेल लगाउने वर्गमा ५५ वर्षभन्दा माथिका खोप नलगाएका व्यक्ति छन्। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक, सहचालक, सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू, खोप अनिवार्य गरेको मुलुकमा जाने नेपाली छन्।
सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार साउन ६ गतेदेखि खरिद गरिएका थप खोप चीनबाट निरन्तर रूपमा ल्याइँदै छ। कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार मात्रा खोप पनि ल्याइएको छ। यस्तै अमेरिकाले कोभ्याक्सअन्तर्गत १५ लाखभन्दा बढी डोज उपलब्ध गराएको छ। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट